LibreOffice 4.0.3 hagaajinta farshaxanka yar | Laga soo bilaabo Linux
LibreOffice 4.0.3 hagaajinta farshaxanka yar
marianogaudix | | Naqshad
Waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan ku dhawaaqo xoogaa horumar ah oo ku saabsan astaamaha LibreOffice. Waxaan kudarsaday astaamo Faenza Icons, sidoo kale waxaan abuuray mawduuc cusub oo la yiraahdo Simple Kalahari si aan u siiyo xoogaa kala duwanaansho ah.
Kalahari fudud weli wali waa horumar
Waxaan ka faalloodaa inaan dhibaatooyin ku qabay Maktabadaha LibreOffice VCL, maaddaama aysan aqoonsan astaamaha leh hufnaan, sababtaas darteed ayaan u beddelayaa astaamaha Faenza.
Diidmada isticmaalka astaamaha hufan ee LibreOffice ayaa ah in astaamo aan firfircooneyn la arki karin. Waxaan idiinka tegayaa qaar ka mid ah sawirrada isbeddelada la sameeyay.
2 Kalahari fudud
Waxaan ka tagayaa iskuxirka soo dejinta astaamaha aan horumariyo.
Hagaag waxaan u soo bandhigay shaqadayda horumariyeyaasha LIbreOffice oo aniga ayay isi siiyeen. Mid ka mid ah horumariyeyaasha ugu waaweyn ee astaamaha LibreOffice waa Mirek2, kan mas'uulka ka ah dayactirka astaamaha Tango ee LibreOffice. Issa Alkurtas waxay soosaaraysaa astaamo loo yaqaan 'Flat icons'.
Halkan waxaa ah xiriiriye aad ku arki karto shaqada Mirek2y by Issa Alkurtass.
Haddii aad rabto inaad uga tagto talooyinkaaga LibreOffice, fadlan ku dhaaf fariimahaaga liistada qaabeynta LibreOffice.
Adiga isticmaale ahaan waad ku caawin kartaa fikradahaaga si aad u hagaajiso astaamaha iyo naqdinta wax dhiseysa. Waad ila soo xiriiri kartaa Gnome-look.org taasi oo ku saabsan iskuxirka soo dejinta ee astaamaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Naqshad » LibreOffice 4.0.3 hagaajinta farshaxanka yar
Weyn waan jeclaa Kalahari, sii wad howsha wanaagsan.
Aad baad ugu mahadsantahay shaqadaada 😀
Shaqadaadu waxay umuuqataa mid wanaagsan… .Waa mid aad u wanaagsan, sii wad
LibreOffice 4.1 beta wuxuu keenaa barta dhinaceeda Lotus
Wixii macluumaad dheeraad ah.
Shaqo wacan, sii wad!
Haa, waxaan jeclaan lahaa inaan wax soo jeediyo, in kasta oo ayna ahayn mawduuca maqaalka. Maaha wax aad u cusub ama asal ah: waxay ku saabsan tahay abaabulka barnaamijyada hal dhinac oo keliya (gimp, blender, iwm).
Waxaan u maleynayaa inay noqon laheyd horumar weyn maxaa yeelay LibreOffice waxay ka faa'iideysan laheyd isticmaalka maaddaama ay si fiican uga faa'iideysaneyso shaashadda (gaar ahaan marka shaashadaha hadda la iibinayo ay yihiin 16: 9). Waxaa laga yaabaa inaad horeyba u ogtahay waxa aan ula jeedo, haddii kale, waxaa jira xiriir: http://pauloup.deviantart.com/gallery/28216273
Waxay sidoo kale noqon doontaa horudhac haddii miiska wax ka beddelka yar uu muuqan doono marka la dooranayo shay kasta oo ku xiga shayga la xushay (kuwa innaga ka mid ah ee ka imanaya Microsoft Office - I, ugu yaraan - waa seegay)
Sikastaba, waxaan u maleynayaa inaysan waxyeello u geysan doonin haddii qof akhriya qoraalkan oo uu xiriir la leeyahay dadka LibreOffice, uu na soo ogeysiiyo haddii ay ku jiraan iyo haddii kale.
LibreOffice waxay isku daraysaa AOO balastarrada "Sidebar".
Fitoschido waxaad tiri bil kahor AOO isma badalin
aan is burinayn. Waxaan qiyaasayaa in Sidebar kaliya laga hirgelin doono magaalada 'Impress' si ay si fiican wax u abaabulaan.
Haddii dhinac dhinac loo qaato qaabka Lotus ee Writer ama Calc, waxay noqoneysaa wax iska hor imanaya mashruuca LibreOffice mana noqoneyso mashruuc madaxbanaan hadaan ku tiirsaneyn AOO 4.X.
Wax aanan ka helin Lotus waa sanduuqyada Combo, uma dhaqmaan sida oo kale. Waxay u baahnaan lahaayeen inay abuuraan batoon dhaqaajinaya daaqadda popup…. Waxaan ku sameyn lahaa Gtk 3.6. http://www.youtube.com/watch?v=9ckRn_sx8CE
Uma arko is burinaya, waan ka xumahay.
Wanaagsan Hada libreoffice-ka runti wax soo saar buu yeelan doonaa.
Waxaad uga tagi kartaa talooyinkaaga LibreOffice, liiska naqshada LibreOffice.
Waa inaan aragnaa haddii lagu samayn karo maktabadaha VCL ee aadka u xun ee LibreOffice.
Waxay noqon doontaa mucjiso hadaan arko LibreOffice oo jees jees ah.
. Maktabadaha VCL lama jaanqaadi karaan Gtk 3.6 ama Qt 4.11 marka LibreOffice si fiican ugama shaqeyso KDE ama GNOME.
Waxaan ku abuuray POC yar Gtk 3.6
iskuday inaad sameyso wax lamid ah jees jeeska aad dhigtay.
Wanaagsan !!! Haddii wax la dhaleeceyn lahaa LibreOffice waxay ahayd sida saxda tan.
Waxyaabaha aniga i dhiba ayaa ah in LibreOffice goobahooda ay ku jiraan dad badan oo iibiya qiiqa ka soo baxa weelasha dushooda oo waqtigooda ku qaata inay la hadlaan blah blah…, iyo inayna haba yaraatee waxba iiga tarin.
Si loo abuuro astaamahan waxay ahayd inaan kaligay ku barto tijaabo iyo qalad. Waxaan ka caawinayaa dadka jooga Awken Dark, FS Icons iyo Nitrux inay horumariyaan xirmooyinka LibreOffice. Maxay LibreOffice u wada fiicantahay, oo lagu daray
oo waxay ahaan doontaa wax cajaa'ib leh in la arko Muuqaalka Awken, Icons FS iyo Nitrux astaamaha kobciya kala duwanaanta
Waxay umuuqataa mid aad ufiican, laakiin hada waxaan rabaa inaan wax ku weydiiyo
Xafiiskayga 'Libre Office' wuxuu umuuqdaa mid laga naxo, wuxuu leeyahay qaab Windows 98 ah sawir dhan waligeyna ma awoodin inaan badalo
Hareeraha ayaan eegay weligayna kamaan ogaan karin sababta ay sidan ugu eg tahay .. qofna fikrad kama haysto sida loo beddelo? Waxaan joogaa Manjaro Xfce
Waxaad arkaysaa iswaafaq la’aanta maktabadaha VCL iyo GTK.
XFCE waxaa lagu qoray GTK
sidaa darteed waa inaad ku dhejisaa isdhexgalka muuqaalka garaafyada.
Waxaan furay terminal-ka oo aan dhigay
sudo apt-get rakib libreoffice-gnome
sidoo kale waxaad ku rakibi kartaa maktabadda balastar iyada oo loo marayo synaptic
ku rid meesha loo yaqaan 'synaptic finder'
libreoffice-gnome iyo libreoffice-gtk3
Maxay tahay shaqo weyn oo aad bulshada u qabanayso.
Astaamuhu waa cajiib, aad baad u mahadsan tahay !!! 🙂
Soo dhaweyntaada, fadlan ……. Waxaan kugula talinayaa inaad gasho bogga Gnome-look.org waqti ka waqti si aad u soo degsato astaamaha ……… madaama aan ku daro astaamaha maqan xirmada si aan u dhameystiro.
Aad baad u mahadsantahay, waxay umuuqdaan kuwa fiican!
Shaqo aan la rumaysan karin, waan kugu hambalyeynayaa, waxaad qabanayso waa qayb weyn.
Marka ugu horeysa, waxaan rabaa inaan kuugu hambalyeeyo shaqada wacan ee ay la socoto astaamaha Faenza ee LibreOffice. Hambalyo, waad fiicantahay. 😉
Marka labaad, waxaan la imid nidaam aan kaga fogaado astaamaha Italic, Bold and UNDERLINED bug
Dhibaatadu waxay ka jirtaa sawirrada faylasha ku jira faylalka ku jira luqadda-gaarka ah. Taasi waa, gudaha faylka CMD ee luqad kasta waxaa ku yaal astaamo caado u ah luqaddaas.
Xaaladdeenna, galka ES-ka waxaa ku yaal astaamaha buluugga ah ee qaladka u muuqda.
Xalka aan soo jeedinayo ayaa ah in la sameeyo iskuxir astaan ​​ah halkii laga tirtiri lahaa.
Xidhiidhka soo socda ayaa ah xalka la adeegsaday oo la tijaabiyay (GNU / Linux):
Aad baad ugu mahadsantahay inaad i caawisay Ciise 8), runtii waan ku qanacsanahay.
Waxaan hada wax ka badalay astaamaha Kalahari si aan u xaliyo isla qaladka, waxaan sidoo kale badalay jihada fallaaraha ee wadamada leh qoraalka muslimiinta ee Faenza iyo Kalahari.
Samee UPDATE hadda gnome-look.org si aad uga warbixiso isbeddelada.
Aad baad u mahadsantahay JeSuSdA 8)
Looma baahna, Mariano.
Waad ku mahadsantahay shaqadaada cajiibka ah. Astaamaha ayaa u muuqda kuwo aad u wanaagsan iskuna dhafan inta ka hartay desktop-kayga. 😉
Salaan kadib waxaanan rajaynayaa inay ugu darayaan iyaga hab ahaan noocyada soo socda ee LibreOffice!
aad ufiican, waxaan usameynayaa xoogaa haha
Sidee qurux badan gaar ahaan kuwa reer Kalahari 🙂
Waad ku mahadsantahay inaad kugula talisay astaamahan aad u quruxda badan ee aad leedahay asalkeyga si aan u raadiyo dadka iyo astaamahaaga kalahari 🙂 Libreoffice wuxuu ahaa mid aad u fiican.
Aad baad ugu mahadsantahay dadka adiga oo kale ah oo ka dhigaya khibrada gnu / linux mid aad u wanaagsan.
Waad soo dhawaynaysaa Alexander, bulshada dhexdeeda wax walba waa la wadaagayaa lana hagaajiyay.
Astaamuhu waa wax fiican, laakiin ma aha mid aad ula jaan qaadi kara isweydaarsiga bey'adda Linux.
Waan jeclahay Faenza!
Su'aal la xiriirta 'libreoffice' ayaa maalin maalmaha ka mid ah la soo qaadi doonaa si loo beddelo qaabkeeda oo aan arko in muddo dheer aan idhaahdo waxay u beddeli doontaa Citrus ama muuqaalo kale maalin uun ayay ku dhammaan doontaa inay qabato ama iyagu uma arkaan inay ku caddahay inay beddelaan muuqaalkooda.
Haddii ay la imaaneyso isbeddelo .LibreOffice-ka nooca 4.1 wuxuu keenayaa dhinaca 'Lotus Symphony sidebar'
Halkan waxaad ku arki kartaa sawirradii ugu horreeyay ee LibreOffice 4.1 beta -
Waa wax aad u xiiso badan in la arko haddii ay horey u sii daayeen nooca 4.1 oo aan aragno haddii ay u muuqato mid ku fiican sawirrada iyo fiidiyowyada sida aad u aragto markaad isticmaaleyso 🙂
Ku rakibidda KDE 4.10.3 Debian Wheezy 64 Bits
LibreOffice Calc: Sida Loo Sameeyo Shaxda Fidsan